नेपाली युवकसँग विवाह गर्दै श्रद्धा कपूर ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
नेपाली युवकसँग विवाह गर्दै श्रद्धा कपूर ?
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरको विवाहको खबर अहिले चर्चामा छन् । उनी अर्को वर्ष कथित प्रेमी रोहन श्रेष्ठसँग विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको खबर बाहिरिएको छ । रोहन नेपाली मुलका हुन् । उनी भारतमा बसेर फोटोग्राफी गर्दै आएका छन् । श्रद्धासँग उनी एक वर्षदेखि प्रेममा रहेको चर्चा छ ।
एजेन्सीको अनुसार, श्रद्धाले विवाह गर्ने मुड बनाएकी छन् र उनी चाँडै रोहनसँग विवाह गर्नेछिन् । बर्षौदेखि एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्ने उनीहरुले गएको वर्षदेखि डेटिङ सुरु गरेका हुन् । श्रद्धा अहिले ३३ वर्षकी छन् । उनलाई माता-पिताले विवाहको बारेमा सोच्न सल्लाह दिएका छन् । उनले प्रेमी रोहनसँग पनि विवाहको बारेमा कुरा गरिसकेको खबर छ । सबै ठिक रहे अर्को वर्ष दुईले लगनगाँठो कस्ने अपुष्ट खबर छ ।
यसअघि श्रद्धा र फरहान अख्तरको रिलेसनसिपको खबर आएको थियो । ‘रक अन’ चलचित्रको छायांकनको बेला उनीहरु नजिक भएका थिए । तर, श्रद्धाका पिता शक्ति कपूरले यस्ता गसिपको खण्डन गरेका थिए । उनले छोरीको विवाहलाई पनि अफवाह मात्र रहेको दाबी गरेका छन् । उनले छोरीले अझै ५ वर्ष विवाह नगर्ने र अहिले उनी पाइपलाइनमा रहेका चलचित्रमा फोकस रहेको बताएका छन् ।
श्रद्धा र रोहनको लिंकअपलाई लिएर भएको सवालमा उनले भने- ‘यो फिल्म इन्डस्ट्री हो, लिंक गर्दैमा केही हुँदैन । रोहनका पिता बलिउडका लोकप्रिय फोटोग्राफर हुन् र मेरो राम्रो साथी हुन् । मेरी छोरीले आफ्नो लाइफमा जे भए पनि मलाई शेयर गर्ने गर्छिन् । उनी परिवारको अनुमती बिना कहिल्यै विवाह गर्दिनन् ।’ रोहनले पनि यसअघि श्रद्धा मिल्ने साथी मात्र रहेको बताएका थिए ।